MACLUUMAADKA TARANKA CANE CORSO ITALIANO EY IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Cane Corso Italiano Ey iyo Sawirro
Hank (bidix) Cane Corso oo ah 4 sano jir isaga iyo saaxiibkiisa ugu fiican Rosie the Cane Corso oo jira 10 bilood. Arag inbadan oo ah Hank iyo Rosie .
Liistada Eeyaha Corso Italiano Isku Darka Eeyaha
The Cane Corso Italiano waa eey cabbirkiisu dhexdhexaad yahay, oo si xoog leh u dhisan laakiin xarrago leh, oo leh muruqyo awood leh oo dhaadheer. Aad ayaa loo kala soocay, wuxuu muujiyaa xoog, kacsanaan iyo adkaysi. Qaab dhismeedka guud waa kan xayawaanka loo yaqaan 'mesomorphic' oo jidhkiisu ka dheer yahay dhererka meesha engegay, oo iswaafajinaya qaabka iyo ismaamul darrada xagga astaanta ah. Afku aad buu u ballaadhan yahay oo qoto dheer yahay. Ballaarinta xuubka waa inuu ku dhowaadaa dhererkiisa kaasoo gaaraya 3.4 / 10 wadarta dhererka madaxa. Moolkiisu waa in ka badan 50% dhererka muuska. Isbarbar dhigyada dhinacyada afka iyo buuxnaanta iyo ballaca daamanka oo dhan, wejiga hore ee masku waa mid siman oo laba jibbaaran. Buundada sanka ayaa leh muuqaal sax ah oo toosan waana mid siman. Muuqaalka hoose ee xuubka waxaa go'aaminaya bushimaha kore qaybta hoose waxay muujineysaa qafis aad u yar. Joojinta ayaa si aad ah loo calaamadeeyay sababtoo ah horumarsan oo sii kordhaya oo ku dhaca sanka hore iyo dariiqyada superciliary caan ah. Qoorta ayaa xoogaa qaansoxan. Qaabka qoorta waa qeyb oval ah, xoogan, muruq badan. Jidhku waa is haysta, xoog badan yahay oo muruq badan. Maqaarku waa mid qaro weyn. Qoorta ayaa ficil ahaan aan lahayn dharab. Madaxa waa inuusan lahayn laalaab. Midabka xuubabka xuubku waa madow. Midabka cagaha iyo ciddiyaha waa inuu ahaadaa madow. Koodhku waa timo gaagaaban laakiin aan jilicsanayn, oo leh muuqaal jilicsan, dhalaalaya, dheggan, adag, aad u cufan, oo leh lakab khafiif ah oo ka sii weynaanaya xilliga jiilaalka (laakiin marna kuma soo baxo timaha daboolaya). Dhererkiisa celcelis ahaan waa qiyaastii. 2 / 2.5 cm. Meesha engegta, kuuskuus, gadaasha dambe ee bowdyaha iyo dabada waxay gaaraysaa qiyaastii. 3 cm iyada oo aan la abuurin darafyo. Xuubka timaha waa mid aad u gaaban, siman, dheggan oo aan ka badnayn 1 / 1.5 cm. Midabka: madow, tubta-cawl, midabkeedu, cawl khafiif ah, buluug / cawl, fawn khafiif ah, cawsha deerada, fawnka madow iyo tuubbada (karbaash aad u wanaagsan loo calaamadeeyay oo ku kala duwan noocyada kala duwan ee cows iyo cawl). Mawduucyada 'fawn' iyo 'tubby' waxa ku jira maaskaro madoow ama cawl oo keliya muuska, mana aha inuu ka gudbo khadka indhaha. Boog yar oo cad oo xabadka ah, talooyinka cagaha iyo buundada sanka waa la oggol yahay.
Aad u daacad ah, diyaarna u ah inuu ka farxiyo oo xasilloon guriga, Cane Corso waa mid caqli badan oo aad u tababaran. Firfircoon oo xitaa maskax leh, isagu waa waardiye aan ilaalin oo ilaalin ah. Cane Corso Italiano wuxuu ku fiican yahay carruurta qoyska. Naxariis leh oo kalgacal leh milkiilaha, iyagu waa kuwo ilaaliya oo haddana jilicsan. Coane Corso wuxuu leeyahay dabeecad aad u deggan. Waxay ka dhigtaa eey ilaalo heer sare ah iyo ilaaliye. Kama soconeyso guriga. Waxay ku dhagan yihiin sayidyadoodii. Haddii ay lagama maarmaan noqoto wuxuu noqdaa mid si geesinimo leh u ilaaliya dadka, guriga iyo hantida. Coane Corso ma aha eey dagaallamaya. Waxaa loo soo saaray sidii eeyo shaqeeya oo xoog badan boqolaal sano. Sidaa darteed kama bixi doonaan iyagoo 'raadinaya' dagaal, laakiin dhinaca kale kama laaban doonaan eeyaha kale ee isku dayaya inay iyagu xukumaan. The Cane Corso wuxuu u baahan yahay milkiil khibrad leh oo yaqaan sida loo muujiyo awood dabiici ah eeyga. Waxay dagaal ku noqon kartaa shisheeyaha iyo eeyaha kale haddii kale bulsho ama hadday isu aragto inay ka sarreyso aadanaha amar bixinta . Waa in si taxaddar leh loo dhexgeliyaa markay tahay kuup. Waxaa si aad ah loogu talinayaa in eeyadan ay noqdaan kuwo si buuxda u socda addeecid loo tababaray . Haddii Cane Corso si buuxda loogu tababaray milkiile adag, kalsooni leh oo iswaafaqsan, dejinta sharciyo eygu waa inuu raaco oo dejinta xadka cad wixii uu sameyn karo iyo wixii uusan sameyn karin, oo ay weheliso bixinta maalin walba habboon jimicsi maskaxeed iyo mid jireed , Cane Corso wuxuu noqon doonaa wehel aamin ah. Baro waxa sameeya shilinta xayawaanka canine oo ku daawee noocyadiisa. Ka shakisanaya shisheeyaha, laakiin layaabka leh qoyska, Corso isku dheelitiran ayaa u dulqaadan doonta shisheeyaha haddii milkiilayaashu joogaan. Goorma si sax ah loo sara kiciyey , eygu waa inuu noqdaa mid u hogaansan dhamaan xubnaha qoyska. Dhegaha Corso asal ahaan waa la jarjaray si looga caawiyo kahortaga yeyda iyadoo la ilaalinayo xoolaha. Dhagahoodu aad ayey uga dareen badan yihiin jirka intiisa kale. Guud ahaan, waxay ficil ahaan u nugul yihiin xanuunka haddii kale, sidaas darteed milkiileyaal badan oo Corso ah ayaa badanaa ka niyad jabsan inay ogaadaan in korantada 'xayndaabka aan la arki karin' nidaamyada xakameyntu aysan ka horjoogsan eeyohooda
Dhererka: Ragga 24 - 27 inji (64 - 68 cm) Dumarka 23 - 25 inji (60 - 64 cm)
Miisaanka: Ragga 99 - 110 rodol (45 - 50 kg) Dumarka 88 - 99 rodol (40 - 45 kg)
Tani waa eey adag oo leh laf caadi ah iyo dhibaatooyin wadajir ah oo ka mid ah noocyada waaweyn.
Qalabka Cane Corso wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii uu helo jimicsi ku filan. Way ku qanacsan yihiin inay dibadda ku noolaadaan haddii ay helaan hoy ku filan.
Noocan jimicsiga fudud wuxuu u baahan yahay jimicsi badan oo joogto ah. Waxay samaystaan ​​asxaab ficil-celin fiican, oo haddii aan maalin kasta la orod, waa in ugu yaraan hal la qaataa socod dheer oo maalin kasta socda .
Qiyaastii 10-11 sano.
Coane Corso uma baahna qurxin badan. Mararka qaarkood shanlee oo caday si aad timaha dhintay uga saarto. Noocani waa iftiin shidan. Qaar ka mid ah Coane Corso ayaa laga yaabaa dhibic ama caajis , gaar ahaan cimilada kulul ama ka dib markaad cabto.
Cane Corso Italiano waa asalka asalka ah ee Cane Corso. Waxay ka timid Talyaaniga. Waxay xiriir dhow la leedahay Neapolitan Mastiff . Muddo sanado ah wuxuu ahaa wehel qaali ah dadka Italic. Loo shaqaaleeyay sidii hanti, lo 'iyo eey ilaaliya shaqsiyeed loona adeegsaday ujeedooyin ugaarsi sidoo kale. Muddooyinkii u dambeeyay wuxuu ka helay aag aad u wanaagsan oo lagu ilaaliyo koonfurta Talyaaniga, gaar ahaan Puglia, Lucania iyo Sannio. Magaca Cane Corso macnaheedu waa 'eey socda' oo af Talyaani ah. Cane macnaheedu waa 'eey' Corso macnaheedu waa 'koorso'. Koorsadu waa cayaaraha lagu raad raacayo eeyo la socda aragga halkii caraf laga heli lahaa. The Cane Corso waxaa laga aqbalay fasalka kaladuwan ee AKC sanadkii 2008.
tilmaamaha jarmalka gaagaaban ee isku xirka collie
Zeus Talyaani Mastiff at 1 sano jir
Khan oo indhaha buluugga ah leh Cane Corso Italiano eey yar oo 9 toddobaad jir ah— 'Khan waa 9 toddobaad jir miisaankiisuna waa 20 rodol. Waa nin yar oo caqli badan oo durba calaamado muujiyay ilaaliya guriga . Wuxuu wax ka baranayaa markasta 4 jirkiisa Daanyeer Weyn walaashiis, Zendri. Waxa kale oo uu soo saaray eeyaheeda gudaha waxayna jeceshahay walaalkeed yar. '
Shady the Cane Corso Italiano da'da 2 1/2 sano
GCH Campo's Solomon by RockHaven the Cane Corso Italiano at 5 sano jir— 'Sulaymaanku waa kan ugu horreeya AKC Champion ee bakooradda corso. Wuxuu leeyahay cinwaano badan oo shaqo sidoo kale. '
'Nero iyo Cassie waa natiijo ka dhalatay taranka sare ee ka imanaya kuwa ugu fiican ee la soo dhoofiyo iyo kuwa dhiiga qaada. Waxay ka diiwaan gashan yihiin AKC iyo ICCF. ' Lahaanshaha sawirka Brusco's Cane Corso
'Tani waa Nero oo jira 1 1/2 sano, culeyskiisuna yahay 125 rodol. Nero waa natiijo ka dhalatay taranka sare ee khadadka dhiigga ee ugu fiican ee la soo dhoofiyo iyo kuwa gudaha. Dabeecaddiisu gabi ahaanba waa qumman tahay oo waxaan u maleynayaa inaad ku raacsan tahay xaqiijintiisu inay tahay sida loo damacsanaa taranka. Ma haysto waqti aan ku muujiyo, laakiin waxaan u maleynayaa in sawirradiisa ay iyagu iska hadlayaan. Isagu waa diiwaan gashan yahay AKC iyo ICCF. ' Lahaanshaha sawirka Brusco's Cane Corso
'Castano Savrona aka Cassie wuxuu ka yimid khad ay ku jiraan kaliya kuwa ugu fiican ee khadadka laga keeno iyo kuwa gudaha. Iyadu waa ayeeyada halyeeyada halyeeyga ah. Waxay ka diiwaan gashan tahay AKC iyo ICCF. ' Lahaanshaha sawirka Brusco's Cane Corso
Horyaalka Talyaaniga, Ducey sawir leh Burgwald Kennel, Laga soo bilaabo 1995
Lahaanshaha sawirka Stormy Winns Kennel
Barone eey Cane Corso ee toddobaadyada 12
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ku saabsan Coane Corso
Sawirada Cane Corso 1
Sawirada Cane Corso 2
Sawirada Cane Corso 3
Eeyaha Cane Corso Italiano: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
chow chow basset hound mix
maxaad chihuahuas eg
sawirada doofaarka guinea madow
bichon frize 1 sano jir
i tus sawirrada eyda adhijirka ah ee Jarmalka
eyda ey ku bilaabmaan l